DHAGEYSO: Baarlamaanka Puntland oo go’aan adag ka qaatay matalaada gobolka Banaadir – HalQaran.com
DHAGEYSO: Baarlamaanka Puntland oo go’aan adag ka qaatay matalaada gobolka Banaadir
Garoowe (Halqaran.com) – Xildhibaano ka tirsan Golaha Wakiilada Puntland oo ka carooday Go’aankii Xildhibaannada Golaha Shacabka Soomaaliya ay ugu ansixiyeen Gobolka Banaadir in uu 13 Xubnood ku yeesho Aqalka ayaa sheegay inay ka codsanayaan Xukuumadda Madaxweyne Deni in ay ka ku dhawaaqdo madax-baani.
Qaar kamid ah Xildhibaannada oo Saxaafada kula hadlay Magaalada Garoowe ayaa waxaa ay sheegeen in Magaalada Muqdisho ay markii hore u aqoon sanaayeen goob dadka lagu dilo laguna dhaco, hayeeshee haatan ay noqotay mid Sharciga lagu dhaco.
Sidoo kale, waxaa ay sheegeen in Xeerarka doorashada oo ay qaarkood ansixiyeen Xildhibaannada Golaha Shacabka aysan aqoonsaneyn, waxaana ay sheegeen inay Puntland tashan doonaan go’aanana soo saari doonaan.
Xildhibaannadan ka tirsan Baarlamaanka Puntland ayaa sheegay in Magaalada Muqdisho ay tahay Magaalo Soomaaliyeed, balse ay u muuqato mid dad gaar ah xigsanayaan, waxaana ay ku eedeeyeen Dowladda Federaalka, maamullada Galmudug, Hir-Shabeelle iyo K/Galbeed inay faquuqayaan maamulada Puntland iyo Jubbaland.
Tags: Baarlamaanka Puntland, go'aan adag, matalaada gobolka banaadir